Çesme (TURKEY): Ny morontsiraka tsara indrindra amin'ny Ranomasina Aegean | Vaovao momba ny dia
Çesme (TURKEY): Ny morontsiraka tsara indrindra amin'ny Ranomasina Aegean
Mariela Carril | | Fialantsasatra any Eropa, General, vorontsiloza
Ny Ranomasina Aegean dia rakotra torapasika tsara tarehy sy toerana fizahan-tany mahafinaritra izay zaraina amin'ny firenena samihafa.
Iray amin'ireo morontsiraka ireo ny Cesme, tanàna sy spa malaza be izay mipetraka eo amin'ny tendrony saikinosy manodidina ny 85 kilometatra miala an'i Izmir, ao vorontsiloza. Ampy izay ny mahita ny sary manome satroboninahitra ity lahatsoratra ity raha te-hitsangatsangana.
1 Cesme, ilay tsara tarehy
2 Inona no ho hita ao amin'ny Çesme
3 Inona no ho hita ankoatran'i Çesme
Cesme, ilay tsara tarehy
Ny anarana amin'ny teny tiorka dia midika hoe "loharano" Ary misy dikany satria manerana ny tanàna dia misy loharano niavian'ny Ottoman sy loharano mafana. Efa hatramin'ny ela no nisy toerana nananan'ny olona manankarena trano faharoa, fa nandritra ny fotoana kelikely dia nanjary resa-dranomasina iraisam-pirenena ny saikinosy.
Hoy Misy hotely, trano fanofana, marina, trano fisakafoanana ary izay rehetra ilain'ny mpitsidika te-handany andro vitsivitsy eto. Ny saikinosy iray manontolo no kendrena, any ankoatry ny tanàna mahafinaritra, satria manodidina azy ireo dia misy tanàna tsara tarehy, tanàna kely hafa ary zaran-tany kanto azo zahana.
Ahoana no ahatongavanao any? Raha tonga ao Izmir ianao dia afaka mandray bisy satria misy serivisy maromaro isan'andro ary mihodinkodina amin'ny zotra mampifandray ireo tanàna roa ireo izy ireo. Afaka tonga koa ianao amin'ny bus avy any Istanbul aorian'ny dia adiny valo na raha any Gresy ianao, any amin'ny nosy Chios, azonao atao izany sambory ny sambo. Adiny iray ny dia.
manavaka misy zotram-pizahantany izay mikasika an'i Çesme , eo anelanelan'ny volana Jona sy Oktobra, ary izany no mahatonga azy manana tobim-pitetezana maoderina izay azo idirana avy ao amin'ny Castle Çesme aorian'ny 20 minitra nandehanana teny amoron-tsiraka.
Soa ihany ao anatin'ny tanàna fa afaka mandeha tongotra ny olona. Tanàna kely izy io ary mora mivezivezy. Sarintany kely dia ampy, mitadiava ny trano mimanda sy voila, mora be ny mandeha. Azonao atao ny mahazo ny sari-tany any amin'ny biraon'ny fizahantany izay eo amoron-tsiraka, eo akaikin'ny tranon'ny Customs ary eo alohan'ny lapa. Manomboka amin'ny 8:30 dia mivoha ny varavarany.
Inona no ho hita ao amin'ny Çesme
tsara Ny kafe, trano dite ary trano fisakafoanana dia be olona manodidina ny kianja lehibe misakafo any ivelany, miala sasatra ary mahita ny fiainana ara-tsosialin'ny tanàna miaraka amin'ny fahitana ny Aegean.
El Castleesme Castle Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX ary naorin'i Sultan Beyzit indray mba hananany fiarovana tsara amin'ny fanafihan'ny jiolahin-tsambo manimba ny faritra tamin'izany fotoana izany.
Izy io dia fiarovana mimanda an'i tilikambo enina sy hady izay manodidina azy amin'ny lafiny telo. Avy any amin'ny vala, ny fahitana ny tanàna sy ny ranomasina dia lehibe ary soa ihany fa trano voatahiry tsara sy izy io tranombakoka tantara roa Tena mahaliana izy ireo.
Ao amin'ny iray amin'izy ireo dia misy famoriam-bola mifandraika amin'ny tanànan'ny Erythrai taloha ary amin'ny iray hafa izay miresaka momba ny ady Tiorka-Rosiana. Ho hitanao eo aloha a sarivongan'i Alzeriana Ghazi Hasan Pasha, komandy malaza amin'ny hetsika ara-tantara fantatra amin'ny anarana hoe Battle of Çesme, ary raha mandeha ianao amin'ny volana jolay dia toerana mahafinaritra ho an'ny fetin'ny mozika karakarain'ny tanàna.
Cesme dia tantara ka ao koa ny fahalalana ny trano mimanda mandehana mamaky ny tanàna taloha ny tanàna izay misy fananganana bebe kokoa tamin'ny taonjato faha-XVIII sy XIX, ny fomba neoklasika grika ary voatahiry tsara. Ho fanampin'izany dia misy tranobe Ottoman, hafahafa kokoa, ary afaka mandeha am-pitoniana mamaky ny arabeny ny olona iray.
Ny sanganasa farany eto an-tanàna dia mifantoka amin'ny morontsiraka satria enin-taona lasa izay ny marina vaovao, lehibe kokoa, miaraka amin'ny rano mamaky rano 90 metatra sy maro an'isa fivarotana sy toerana fisakafoanana sy fisotroana amoron-dranomasina.
Ny atsimon'ny tanàna no morontsiraka tsara indrindra izay ahafahanao milentika masoandro, Windurf na kitesurf koa. Misy fasika volamena kilaometatra maro kilaometatra manerana ny saikinosy ary misy zavatra maro azo isafidianana, na dia misy aza tsy azo aleha ary manontany tena izy ireo rehefa hanatsara ny fidirana.
Ny tora-pasika sasany dia tena malaza ary tsy maintsy mandoa vola miditra ianao amin'izany, izany no tranga amoron-dranomasina amoron-dranomasina Beach Club, ao amin'ny cove Piyade. Inona izany dia tsy maintsy hijery sy ho hita.
Ny iray amin'ireo morontsiraka tsara indrindra dia ny Pirlanta Beach, miparitaka sy volamena, atsimo andrefan'ny tanàna fotsiny, ary misy iray hafa Altinkum Beach. Raha tianao ny rano malefaka kokoa dia kodia Beach, ny tena tadiavin'ny fianakaviana manan-janaka. Toy izany koa ny Buyuk Beach, miaraka amina rano milamina, tena madio sy mafana noho ny akaiky ny loharano mafana, ary voaravaka fasika fotsy fa tsy volamena toa ny ambiny.
Izany dia mahatonga ny moron-dranomasina hipoka be dia be, ka raha mandeha amin'ny vanim-potoana avo ianao dia miomàna ho an'ny vahoaka. Manamboatra windsurfing tokony handeha any amin'ny lavitra indrindra ianao Alacati, iray amin'ireo toerana tsara indrindra eto an-tany manao fampiharana ity fanatanjahantena ity, eny fa na dia ny fifaninanana iraisam-pirenena aza.
Inona no ho hita ankoatran'i Çesme
Tsy ny morontsiraka, ny masoandro ary ny fitsaharana no zava-drehetra. Raha iray amin'ireo mpizaha tany mavitrika ianao, izay tsy afaka mijanona mandritra ny andro lava, dia afaka mandamina fitsangatsanganana manodidina. Betsaka ny toerana arkeolojika mahaliana eto amin'ity faritr'i Torkia ity.
Akaiky ny spa nataon'i Ilica miaraka amin'ny helodrano misy fasika fotsy sy fandroana mafana. Sahabo ho 20 kilometatra eo ho eo no IIdiri, tranokala iray nambara fa ny vakoka nasionaly hatramin'ny fahagola, ny rindriny sy ny gorodona mozaika avy amin'ny vanim-potoana Hellenic dia mbola mamirapiratra hatrany. Ary raha miakatra any amin'ny akopolisany ianao amin'ny filentehan'ny masoandro, ahoana ny fahitana!
dalyan dia tanàna fanjonoana any amoron'ny rano lalina avaratra atsinanan'ny Çesme. Araka ny azonao an-tsaina, ity dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra fihinanana trondro sy hazan-dranomasina ary amin'ny alina dia mampirehitra jiro ny trano fisotroana ary manana fotoana mahafinaritra be ianao.
vola Citflik, aiza ny moron-dranomasin'i Pirlanta Plaj sy morontsiraka Altinkum, akaikin'izay azonao itobiana. Ny vohitr'i Alaçcati tsara tarehy izy io, ary ny sasany amin'ireo rivotra misy azy dia navadika ho trano fisakafoanana ary manana morontsiraka maro koa izy.
Urla Iskelesi toeran-kafa any amin'ny saikinosy io ary mitovy ihany Gümüldür, Sigacik na Seferihisar, ny toerana rehetra misy morontsiraka sy rava taloha.
Afaka mandray bus ianao ary mitsidika an'i Izmir, ohatra, ilay Smyrna taloha, hamakivaky azy tranombakoka arkeolojia sy etnografia, avy amin'ny sisa tavela amin'ny Forum Romanina, ny trano mimanda ary izay rehetra voavonjy tamin'ny ady Russo-Tiorka tamin'ny taona 20.
Fitsangatsanganana iray hafa azonao atao ny mandeha fantaro Efesosy, tsy isalasalana fa perla avy any Mediterane izay misy ifandraisany amin'ny lasa Greco-Romana amin'ity faritra ity. Eo ihany koa ny faharavan'ireo taloha Pergamôna, avaratry Bergama, ary raha te handroso bebe kokoa ianao dia mandrosoa mankamin'ny afovoany vao tonga Hierapolis sy Pamukkale miaraka amin'ireo rava mahafinaritra sy riandrano misy ranomandry, riandrano izay vita amin'ny vatosokay ary toa miala amin'ny sisin'ny tendrombohitra. Seho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » vorontsiloza » Çesme (TURKEY): Ny morontsiraka tsara indrindra amin'ny Ranomasina Aegean
Fialan-tsasatra any Karaiba any Costa Rica